Photos Archives - Page2of 105 - Xinhua News Agency
တရုတ်နိုင်ငံ အနောက်ပိုင်းဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု မြှင့်တင်ရန်နှင့် ဒေသစီးပွားရေးနှင့် လူမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အထောက်အကူဖြစ်စေသော စီချွမ်းပြည်နယ်ရှိ ထိပ်တန်းစီမံကိန်းများ (ဆင်ဟွာ)
(English Version) CHINA-SICHUAN-SUPER PROJECT-WESTERN DEVELOPMENT (CN) 2021-12-10 00:08:29 A series of “Super Projects” in Sichuan have been built to promote the development of western China, making...
ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ အနောက်မြောက်ပိုင်း ပီရှာဝါမြို့တွင် ကျင်းပသည့် အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အလှပြိုင်ပွဲအား တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
…………………………………………. (English Version) (BeijingCandid)CHINA-BEIJING-SUNRISE-SUNSET (CN) 2021-12-03 16:00:41 1. Photo taken withamobile phone shows sunset glow over Taoranting Park in Xicheng District of Beijing, capital...
တရုတ်နိုင်ငံသဲကန္တာရရှိ ရထားလမ်း၌ လေဒဏ်နှင့်သဲထုဖုံးလွှမ်းမှုကာကွယ်ရန် ဆောက်လုပ်ထားရှိမှုများ
ဝူးလူမုချီ၊ ဒီဇင်ဘာ ၁ ရက် (ဆင်ဟွာ) တရုတ်နိုင်ငံ အနောက် မြောက်ပိုင်း ရှင်းကျန်းဝေဂါကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသရှိ Gobi သဲကန္တာရတွင် လေပြင်းများတိုက်ခတ်လေ့ရှိသည့် ကြားမှ ရထားလမ်းပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်သားများသည် ရထားဝန်ဆောင်မှုများလုံခြုံစိတ်ချမှုရှိစေရန် နှစ်ပေါင်း ၃၀ ခန့် ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည်။ လေအလွန်ပြင်းစွာတိုက်ခတ်သည့်နေ့များတွင် ၎င်းတို့သည် ရထားလမ်းများပေါ်မှ သဲများကိုဂေါ်ပြားများနှင့်ဖယ်ထုတ်ကြရသည်။သို့ရာတွင် လက်ရှိတွင်နည်းပညာသစ်နှင့်အတူ လေပြင်းအကာအကွယ်စနစ်များ ကိုအသုံးပြုလာနိုင်ခဲ့သောကြောင့်...
…………………………………….. (English Version) Rescuers evacuate residents after heavy rainfall in Bangalore, India Source: Xinhua| 2021-11-23 07:32:51|Editor: huaxia 1-4-Rescuers evacuate residents from inundated areas after...
ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့ရှိ ဈေးတစ်ခုတွင် ရေကြီးရေလျှံမှုဖြစ်ပွားနေသည်ကို နိုဝင်ဘာ ၉ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
————————————– (Chinese Version) （第四届进博会） “四叶草”静候开幕 2021-11-04 15:48:25 新华社照片，上海，2021年11月4日 “四叶草”静候开幕 这是11月4日拍摄的国家会展中心（上海）南广场。 第四届中国国际进口博览会开幕式将于11月4日晚举行。进博会的举办场所、昵称为“四叶草”的国家会展中心（上海）静候开幕。 新华社记者 张豪夫 摄
———————————- (Chinese Version) （环境）秋染京城 2021-11-02 14:31:18 新华社照片，北京，2021年11月2日 秋染京城 11月2日在北京玉渊潭公园拍摄的秋色。 金秋时节，北京秋意正浓，美景如画。 新华社记者 罗晓光 摄